အက်ရှင်​ဇာတ်ကြမ်းတွေထဲမှာ ရှားရှားပါးပါး အရိုဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ​​နဲ့ ပရိသတ်​တွေကို ရင်ခုန်​​စေခဲ့တဲ့ K-drama စုံတွဲ (၅) တွဲ
K-drama ​​ဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အချစ်ဟာသ၊ သည်းထိတ်ရင်ဖို၊ မှုခင်းအက်ရှင်စတာ​တွေအပြင် အခြား​သော အမျိုးအစားများစွာ ထွက်ရှိ​လေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ ပရိသတ်​တွေဟာ romance comedy လို့ ​ခေါ်တဲ့ အချစ်ဟာသအမျိုးအစားကို ပိုပြီးနှစ်သက်ကြပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားဟာ ​ပေါ့​ပေါ့ပါးပါးရှိပြီး ​​ခေါင်း​ဆောင်မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးတို့ရဲ့ ရိုမန့်စ်ဇာတ်ဝင်ခန်း​တွေက ကြည့်ရှုသူ​တွေကို ရင်ခုန်​စေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ အက်ရှင် drama ​တွေထဲမှာလည်း ရိုမန့်စ်ဇာတ်ဝင်ခန်း သိပ်မပါ​ပေမဲ့ ပရိသတ်​​တွေကို ရင်ခုန်​အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ အက်ရှင် K-drama စုံတွဲ​အချို့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီစုံတွဲ​တွေက​တော့
1. Cha Dal Gun, Go Hae Ri – “Vagabond”
Netflix ရဲ့ နာမည်ကြီး အက်ရှင် drama ဖြစ်တဲ့ “Vagabond” ဟာ Lee Seung Gi နဲ့ Suzy တို့ အတူတွဲဖက်သရုပ်​ဆောင်ရတဲ့ ဒုတိယ​​မြောက် ပ​ရောဂျက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် သူတို့ရဲ့ အချိတ်အဆက်မိမှုဟာ သဘာဝကျပြီး “Vagabond” ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတိုင်းမှာ သက်​တောင့်သက်သာဖြစ်​နေတာကို ​တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အချစ်၊ အလွမ်းဇာတ်ဝင်ခန်း​တွေ သိပ်မပါ​ပေမဲ့လည်း Cha Dal Gun နဲ့ Go Hae Ri တို့ရဲ့ တစ်ဦး​ပေါ်တစ်ဦးထားရှိတဲ့ ခံစားချက်​တွေကို ​ပေါ်လွင်​အောက် သရုပ်​ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီး သူတို့ ၂ ဦးရဲ့ ရှားရှားပါးပါး အရိုဇာတ်ဝင်ခန်း​တွေကို ပရိသတ်​တွေက သ​ဘောကျနှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြပြီး “Best Couple” ဆုကို​တောင် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။
2. Jeon Pil Do, Yoon Ji Woo – “My Name”
Han So Hee ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Netflix ရဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုအက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ “My Name” မှာ အကြမ်းပတမ်းအက်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်း​တွေကို သရုပ်​ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ယခင် နုနုရွရွ လှလှပပ ပုံရိပ်ကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တာ​ကြောင့် ပရိသတ်​တွေ ချီးကျူးတာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Han So Hee နဲ့ Ahn Bo Hyun တို့ကြားက chemistry ကလည်း ဒီဇာတ်လမ်းကို အရှိန်မသတ်ပဲ ဆက်ပြီး ကြည့်ချင်​အောင် ဆွဲ​ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Yoon Ji Woo ကို သနားပြီးချစ်စိတ်ဝင်မိသွားတဲ့ Jeon Pil Do နဲ့ သူမရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်​ပေးနိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်း​သောသူဖြစ်တဲ့ Jeon Pil Do ကို ​မေတ္တာသက်ဝင်မိသွားတဲ့ Yoon Ji Woo တို့ ချစ်တင်း​​နှောကြတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းဟာလည်း social media ​ပေါ်မှာ ပွက်​လောရိုက်သွားခဲ့ပါ​သေးတယ်။
3. Kim Soo Hyun, Do Hyun Jin – “Kill It”
“Kill It” က​တော့ Jang Ki Yong နဲ့ Nana တို့ ​တွေ့ဆုံကြတဲ့ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ​တော့ သူတို့ဟာ လူ ၂ ဦးကြားက မဖြစ်နိုင်တဲ့အချစ်ကို သရုပ်​ဖော်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာ​ကြောင့်လဲဆို​တော့ Jang Ki Yong သရုပ်​ဆောင်ရတဲ့ Do Hyun Jin ဇာတ်​ကောင်ဟာ ရဲအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Nana သရုပ်​ဆောင်ရတဲ့ Kim Soo Hyun ဇာတ်​ကောင်က သူမရဲ့ ရည်းစား​​ဟောင်းကို လုပ်ကြံခဲ့တဲ့ ​ကြေးစားတစ်ဦးဖြစ်​​နေလို့ပါပဲ။
ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်​နေတဲ့တစ်​လျှောက်လုံးမှာ ပရိသတ်​တွေဟာ Soo Hyun ရဲ့ သရုပ်မှန်ကို Hyun Jin သိသွားခဲ့ရင် သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံ​ရေးက ဘာဆက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရှုခဲ့ကြရပါတယ်။
4. Jung Yi Hyun, Yoon Sae Bom – “Happiness”
မကြာခင်ကမှ tvN ရုပ်သံလိုင်းက​​နေ စတင်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ “Happiness” ဟာဆိုရင် လက်ရှိမှာ ပရိသတ်​တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အများဆုံး ရရှိထားတဲ့ drama တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သည်းထိတ်ရင်ဖို အက်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်း​တွေနဲ့ ပြည့်နှက်​နေတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာဆိုရင် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ​ဖေးမကူညီကာ အချင်းချင်း ကာကွယ်​ပေးတတ်ကြတဲ့ Yi Hyun (Park Hyung Sik) နဲ့ Sae Bom (Han Hyo Joo) တို့ကြားက အရို moment ​လေး​တွေက ကြည့်ရှုသူ​တွေကို ပိုပြီးရင်ခုန်​စေပါတယ်။
Park Hyung Sik နဲ့ Han Hyo Joo တို့ဟာ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် ပထမဆုံး အလုပ်အတူတွဲလုပ်ဖူးတာဖြစ်ပြီး စီနီယာ၊ ဂျူနီယာ​တွေဖြစ်​ပေမဲ့ chemistry က​တော့ ​​ပြောစရာမလို​လောက်​အောင် ​ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ​လာမယ့်အပိုင်း​တွေမှာ Yi Hyun နဲ့ See Bom တို့ရဲ့ love line က ဘယ်လိုဖြစ်လာဦးမလဲဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
5. Vincenzo, Hong Chae Young – “Vincenzo”
Song Joong Ki နဲ့ Jeon Yeo Bin တို့လို ထူးချွန်ပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ သရုပ်​ဆောင်​တွေ ပါဝင်တဲ့ “Vincenzo” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာလည်း သရုပ်​ဆောင်​တွေ​ကြောင့်သာမက အဓိကဇာတ်​ဆောင် ၂ ဦးရဲ့ အချိတ်အဆက်မိမှု​ကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရဲ့ ​အ​အောင်မြင်ဆုံး drama တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီ drama ထဲမှာ Vincenzo (Song Joong Ki) နဲ့ Hong Chae Young (Jeon Yeo Bin) တို့ရဲ့ love line ကို အရမ်းကြီး အသားမ​ပေးထား​ပေမဲ့ ကြည့်ရှုသူ​တွေဟာ သူတို့ ၂ ဦးရဲ့ chemistry ကို ​ပေါ်လွင်တဲ့ moment ​သေး​သေး​လေးကအစ သတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် Song Joong Ki နဲ့ Jeon Yeo Bin တို့ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရဲ့ အ​ကောင်းဆုံး K-Drama စုံတွဲ​တစ်တွဲအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
Next သီချင်း Record လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီအရာ (၃) ခုမရှိဘဲ မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ BLACKPINK's Lisa »
Previous « Yang Mi နာမည်ကို မဆိုင်ဘဲ ထည့်သုံးတာကြောင့် စိတ်ပုပ်သူအဖြစ် ဝေဖန်ခံရတဲ့ Chen Xiaoyun
တရုတ်ပြည်မှနာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များရဲ့ ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ မောင်နှမ၊ ညီအစ်မများ
ဘဲလေးကဖို့ ရပ်နားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းအစစ်အမှန်ကို ဖွင့်ပြောခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Mina